Akụkụ akara - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Ndenye akara bụ ụzọ dị irè iji gbakwunye logos ma ọ bụ iji ederede ederede gaa na atụmatụ gị ma na-ejikarị ya eme ihe maka itinye aka na ngalaba n'oge nrụpụta zuru oke.
● Tinye na eletrọniki, eriri sekit (IC), ngwa eletriki, nkwukọrịta mkpanaka, ngwaahịa ngwaike, ngwa ngwa, ngwa ọrụ, iko na elele, ọla, akụkụ akpaaka, bọtịnụ plastik, ihe ụlọ, ọkpọkọ PVC, akụrụngwa ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. .
A-materials Ngwa ndị dị na ya gụnyere: ọla nkịtị na alloys (ígwè, ọla kọpa, aluminom, magnesium, zinc na ọla ndị ọzọ), ọla ndị na-adịghị ahụkebe na alloys (ọla edo, ọlaọcha, titanium), oxides metal (a na-anabata ụdị ọla edo ọ bụla), Mkpa pụrụ iche ọgwụgwọ (phosphating, aluminum anodization, electroplating elu), ABS ihe (electric ngwa oru ụlọ, kwa ụbọchị mkpa), ink (uzo igodo, biri ebi ngwaahịa), epoxy resin (electronic akụrụngwa nkwakọ, mkpuchi oyi akwa).
Ngwaahịa akara gụnyere akara laser na ihe osise cnc.
LASARING AKW LKWỌ
Marking marking bụ usoro akara nke na-eji laser dị elu na-arụ ọrụ na mpaghara iji mee ka ihe ọkụkụ dị elu ma ọ bụ mepụta mmeghachi omume nke mgbanwe agba, si otú ahụ na-ahapụ akara na-adịgide adịgide.
Ihe bụ isi ụkpụrụ nke laser marking bụ na a elu-ike na-aga n'ihu laser doo na-site a laser generator, na lekwasịrị anya laser omume na-ebi akwụkwọ ihe na-ntabi-agbazekwa ma ọ bụ ọbụna vaporize elu ihe. Site na ịchịkwa ụzọ nke laser n'elu ihe ahụ, Formdị akara ngosi achọrọ.
● A na-eji akara ngosi laser eme ihe site na nhazi na-enweghị kọntaktị, nke nwere ike kaa akara na ụdị ọ bụla pụrụ iche, na workpiece agaghị agbanwe agbanwe ma mepụta nrụgide dị n'ime. Okwesiri maka akara metal, plastik, iko, seramiiki, osisi, akpụkpọ anụ na ihe ndị ọzọ.
A-● Laser nwere ike ịkọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ niile (dịka piston, mgbaaka piston, valvụ, oche valvụ, akụrụngwa akụrụngwa, ngwa ngwa, ngwa eletriki, wdg), na akara ndị ahụ na-eyi na-adịgide adịgide, usoro mmepụta dị mfe iji rụọ ọrụ, akụkụ ndị nwere akara nwere nrụrụ dị ntakịrị.
A-is Okwesiri igbutu, ihe osise ndi ozo na uzo ato di iche iche na ihe di iche iche di iche iche. Tụkwasị na nke ahụ, ọrụ ndị bụ isi na uru nke igwe ihe osise a na-arụ ọtụtụ ọrụ: dị ike, ọtụtụ nzube, ma ọ bụ iji ọla kọpa, igwe anaghị agba, titanium, aluminom na mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ ndị ọzọ, usoro ihe osise na ọkaibe eserese. , wdg Kwee ya. N'ihi na ndị dị ike osise na plating ọrụ nke a igwe, na workpiece nwere ike esichara site nnukwu-format ihe ịrịba ama na obere breastplates na nameplates.
● CNC osise bụ a Nchikota mkpọpu ala na-egwe ọka na usoro nke nhazi ụkpụrụ. Nhọrọ ziri ezi nke ihe osise CNC na iji nkà na ụzụ eme ihe nwere ike ịghọ oru ngo na nlọghachi dị elu na ntinye ego. Ebe ọ bụ na CNC osise ihe na-ji mgbagwoju ihe nakawa etu esi, peculiar shapes, na ezi okokụre ngwaahịa, mgbe CNC osise igwe bụ tumadi ìhè-arọ owuwu, nke a n'ezie amachi na-arụ ọrụ mode nke CNC osise dị ka: "ngwa ngwa-egwe ọka na obere ngwaọrụ". N'ezie, nke a bụkwa Ọ "uru ọrụ" nke ihe osise CNC, ihe kpatara ya bụ na ihe osise CNC na-eme "azụmahịa nke a na-apụghị ịhazi ya site na nnukwu ngwaọrụ." N'ihi pụrụ iche ọkachamara uru nke CNC osise, GNC osise bụ ihe kemfe ndị na-esonụ ụlọ ọrụ: ebu ebu ụlọ ọrụ na mgbasa ozi osise ụlọ ọrụ.